Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny orinasanao raha tsy very ny fifamoivoizana | Martech Zone
Zoma, Desambra 16, 2016 Zoma, Desambra 16, 2016 Natasa Djukanovic
Tsy betsaka ny orinasa no mahalala ny zava-drehetra amin'ny fotoana hanombohany ny tranonkalany. Mifanohitra amin'izany aza, saika ny 50% amin'ireo orinasa madinidinika dia tsy manana tranokala akory, mainka moa fa ny marika iray izay tadiavin'izy ireo hamboarina. Ny vaovao tsara dia tsy voatery ho voatery hamoaka izany rehetra izany avy hatrany amin'ny ramanavy ianao. Rehefa vao manomboka ianao, ny zava-dehibe indrindra dia izany - manomboka. Manam-potoana hanaovana fanovana sy rebrand foana ianao. Amin'ny maha CMO an'ny Domain.ME, mpikirakira anaran-tsehatra manokana .ME, vavolom-barotra kely sy lehibe aho isaky ny isan'andro.
Tsy mitovy ny antony ao ambadik'ireo tetikasa ireo. Ny olona sasany dia terena fotsiny hanova ny anaran'ny marika amin'ny merger, na mety misy ifandraisany amin'ny sarin'ilay marika ankehitriny, ary misy orinasa te-hanandrana fotsiny!
Na inona na inona antony dia misy zavatra iray azo antoka - tianao ny hitazomana ny orinasanao amin'ny famerenanana indray. Fa ahoana no ahafahanao mitazona ny mpanjifanao mahazatra miditra eo am-baravarana rehefa nanova ny mari-pamantarana ianao, ny anarana, ny loko ary izay rehetra hitany fa mahazatra?
Fanalahidy ny fanaovana ny mpanjifanao ho anisan'ny rebranding anao. Ny fandraisana andraikitra sy ny fanehoan-kevitra tsy miova avy amin'ny mpihaino anao no zava-dehibe indrindra amin'ny tetezamita iray mahomby. Ny tsara indrindra, ireo mpiaro ny marika tsy mivadika indrindra aminao dia ho vondrona fitsapana ho an'ny endrika vaovao. Mihainoa azy ireo, manaova fitsapan-kevitra raha mino ianao fa afaka mahazo valiny mahomby ary avelao izy ireo ho lasa tena ampahany amin'ny orinasanao. Ankafizin'ny olona ny firotsahana an-tsehatra ary mety hamporisika sy hiaro ny marikao aza izy ireo raha mahatsapa fa nanampy anao tamin'ny fananganana azy voalohany.
Ahoana ny amin'ny tranokalaniko?
Ny fitazonana ny fifamoivoizanao sy ny laharam-pahamehanao eo amin'ny fikirakirana ny rebranding sy ny fanovana ny anaranao dia ho mafy tokoa. Omano ny tenanao fa ho very mpitsidika tokoa ianao (ary ny varotra sasany koa) noho io asa io. Na izany aza, ny valiny farany dia mety hahatonga azy io ho mendrika ary ny tetezamita tsara eritreretina dia mety hampihena ny fahasimbana. Hanomboka anao ireto lalàna dimy ireto:
Fantaro ny loharanom-pifamoivoizanao - Ianao dia mila topy maso amin'ny antsipiriany hoe avy aiza ny fivezivezenao ankehitriny (mora azo amin'ny alàlan'ny Google Analytics Tools anao). Diniho tsara ireo fantsona izay mitondra ny fivezivezena betsaka indrindra - ary ataovy izay hahazoana antoka fa ampahafantarina ny mpihaino azy ireo ny momba ny rebranding sy ny fanovana sehatra. Manokàna fotoana hamoronana paikady izay hikendry ireo fantsona manokana ireo ary hampahafantatra azy ireo momba ny fanovana haingana sy mahomby.
Tazomy amin'ny pejy iray ihany ny mpitsidika - Efa nandre momba ireo fanodinana 301? Ireny mpitsidika tranokala ireny dia mamindra amin'ny URL hafa noho ilay iray izay nampidiriny tao anaty tranokalan'izy ireo tany am-boalohany na nanindry avy tamin'ny lisitry ny valin'ny fikarohana. Izany dia manampy amin'ny fahazoana antoka fa ny mpanjifanao izay tsy mahalala ny momba ny famerenanao indray sy ny fanovana sehatra dia voatarika mankany amin'ny tranokalanao vaovao. Rehefa avy namorona tatitra backlink ianao ary nametraka hoe iza avy ireo loharanom-pahalalana miresaka momba ny tranokalanao, dia azonao antoka fa manondro adiresy tranokala vaovao ireo URL ireo. Azonao atao ny manakarama olona matihanina amin'ity dingana ity.
Tsoahy ny plug - Rehefa avy nanamarina ny zava-drehetra indroa ianao ary nampahafantarina tsara ny mpihaino momba ny tetezamita, ny dingana manaraka dia ny fandefasana ny tranonkalanao vaovao. Amin'izay fotoana izay dia te hanana ny kaonty Google Analytics sy ny Search Console ianao mifandray amin'ny sehatra vaovao. (Zahao Douglas's lisitra fanovana domain eto!) Tsy izany ihany, fa mila mitazona ny marika taloha ihany koa ianao amin'ny marika meta sy kopia an-tsoratra ny fanananao vaovao hahafahan'ny motera fikarohana ary manondro ny fanovana araka ny tokony ho izy.
Hanavao ny rohy sy ny lisitry ny - Mila havaozina ny lahatahiry orinasa rehetra misy ny tranokalanao - ary raha nanambola tamin'ny SEO teo an-toerana ianao ary manana rohy an-jatony amin'ny lahatahiry orinasa manerana ny Internet dia handany fotoana be izany. Backlinks, toy ireo ao amin'ny lahatahiry orinasa, dia famantarana ny maha-zava-dehibe anao sy ny fisianao amin'ny tranonkala. Mankanesa any amin'ireo tranonkala nifandray taminao taloha ary angataho izy ireo hanova ny rohin'izy ireo amin'ny URL vaovao anao mba hanohizanao hanao tsara hatrany amin'ny valin'ny motera fikarohana.
Mampiroborobo, mampiroborobo, mampandroso - Manararaotra PR, mandefa vahiny, fanambarana mailaka, PPC ary ireo fantsom-barotra nomerika rehetra mba hampahafantaran'ny olona fa eo ianao miaraka amina sary sy sehatra vaovao. Mety handresy anao amin'ny làlana vaovao aza ity fandaniana ity, ary tena hanampy ireo motera fikarohana handrindra ny mombamomba anao ary hametraka araka ny tokony ho izy ny fanovana anao. Ny tetikasa rebranding tsy misy fampielezan-kevitra amin'ny marketing dia fandaniam-poana fotsiny, koa miankina amin'izany fampiasam-bola izany koa.
Ny fanovana dia ara-dalàna eo amin'ny tontolon'ny asa na ho an'ny orinasa vaovao na orina. Ny fahalalana ny fomba hahatafitana velona sy hiroborobo amin'ireo fanovana ireo dia tena ilaina, koa ataovy izany ezaka fanampiny izany hanehoana ny asanao amin'ny tena tsara indrindra.
Tags: fanovana domainlisitra fanovana domainhanomezana endrika vaovao indrayrebranding
Mpahay toekarena amin'ny fanabeazana, Natasa Djukanovic no talen'ny varotra sy varotra Domain.ME, ilay orinasa teknolojia iraisam-pirenena izay miasa amin'ny sehatra internet ".ME." Nandany ny asany manontolo izy teo amin'ny fihaonan'ny banky, media sosialy, fitarihana ary teknolojia, ary manandrana mamantatra hatrany ny tsiambaratelo amin'ny toerana telo samihafa amin'ny fotoana iray.
SocialReacher: Inona no atao hoe Advocacy ho an'ny mpiasa sosialy?